Klopp oo si xiiso leh kaga hadlay wararka la xiriirinaya Mohamed Salah inuu ka tagayo Liverpool – Gool FM
(Liverpool) 28 Feb 2021. Wargeyska “Liverpool Echo” ee dalka England ayaa daabacay wareysi uu bixiyay macalinka reer Germany ee Jürgen Klopp, kaasoo uu kaga hadlay msutaqbalka Mohamed Salah.
Mohamed Salah ayaa albaabka u furay suurtogalnimada uu kaga tagi karo Liverpool mudada soo socota, maadaama uu si maldahan u sheegay fikirka uu ugu dhaqaaqi karo horyaalka Spain gaar ahaan kooxaha Real Madrid iyo Barcelona.
Klopp ayaa hadalkiisa ku sheegay inuu aaminsan yahay in Salah uu sii joogi doono Liverpool sanado badan oo soo socda, taasoo la micno ah inuusan ka tagi doonin garoonka Anfield xagaaga soo aadan.
Haddaba macalinka reer Germany ee Jürgen Klopp ayaa wareysiga uu bixiyay waxaa hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaan u maleynayaa in fikirka ah inaan amaano ciyaartoydeyda ay u muuqato wax la yaab leh, taasoo ah wax aan jeclahay inaan ku sameeyo si daacadnimo leh, gaar ahaan Salah.”
“Rikoorrada Mohamed Salah ayaa iyagu iskood u hadlaya, kaliya ma ahan gooldhaliye ku wanaagsan shabaqa hortiisa, laakiin wuxuu si cad ugu hormaray inuu yahay ciyaaryahan kubadda cagta sidoo kale, waa ciyaaryahan aad muhiim noogu ah, waxaana rajeynayaa inuu nala sii joogi doono ilaa iyo inta suurtogalka ah, dabcan.”